Daawo Sawirada Wasiirada Isboortiga oo kormeertay Garoonka Banaadir | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Wasiirada Isboortiga oo kormeertay Garoonka Banaadir
Published on December 3, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(03-12-2017) Wasiirada Dhalinyarada iyo Isboortiga dalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa maanta soo kormeertay garoonka kubada Cagta Stadium Banaadir ka hor furitaanka cayaaraha kubada cagta maamul gobaleedyada dalka.
“Inta badan shqadii dayactirka ee garoonka ka socotay way soo dhamaatay, waxaana jeclahay in bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago in cayaaruhu ay bilaaban doonaan xiligii loogu talagalay oo ah 7-da bishan wax dib u dhac ahna ma jiri doono”ayay saxaafada u sheegtay Wasiirada Isboortiga Marwo Khadiija Maxamed diiriye.
“Waxaan fursadan uga faa’iideysanayaa in aan amaan usoo jeediyo xiriirka kubada cagta qaranka Soomaaliyeed howsha weyn ee ay dhabarka saarteen. Waxaan aad ugu rajo weynahay in cayaaruhu si qurux badan ku bilowdaan si qurux badana ku dhamaan doonaan”ayay hdalkeeda sii daba dhigtay Marwo Khadiija Maxamed Diiriye.
“Kooxaha qaarkood waa ay yimaadeen waxaana la dajiyay hoteeladii loogu talagalay , inta harsana ugu dambeyn barri ayay imaan doonaan caasimada”ayay tiri marwo Khadiija Maxamed Diiriye.